कांग्रेसमा दुई धार : निर्वाचन कि पुनःस्थापना ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार
पुस २६, २०७७ कुलचन्द्र न्यौपाने
काठमाडौँ — अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बोल्न नहुने भनेर प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा बोल्ने पार्टीका नेताहरूलाई सचेत गराउँदै आएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनको पक्षमा अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा शनिबार काठमाडौंको नारायणथानमा आयोजित विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै । तस्बिरः रासस
अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई सदर गरेमा सबै राजनीतिक दलले भाग लिने दाबी गर्दै देउवाले कार्यकर्तालाई चुनावी मैदानमा उत्रन आग्रह गरे । ‘प्रधानमन्त्रीको पार्टी चुनावमा जाने, हामी घरमै बसेर काम छैन,’ शनिबार काठमाडौं क्षेत्र नं. ५ मा आयोजित विरोधसभालाई सम्बोधन गर्दै देउवाले भने, ‘अदालतले जे फैसला गर्छ, हामी स्वीकार गर्छौं । अदालतले जनतामा जाने फैसला लिए के बिग्रियो त ? सर्वोच्चभन्दा जनता नै ठूलो अदालत हो । चुनावमा जाने निर्णय आयो भने कांग्रेस भाग्न हुन्न ।’
पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले असंवैधानिक कदम सच्चिनुपर्ने पार्टीको आधिकारिक धारणा रहेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक, सर्वसत्तावाद, अधिनायकवाद हो । यसलाई असफल बनाइन्छ,’ शर्माले भने, ‘कांग्रेसभित्र व्यक्तिगत रूपमा नेताहरूले कहाँ के बोल्नुहोला तर कांग्रेसको लिखित डकुमेन्ट छ, प्रवक्ताबाट जारी हुने अभिव्यक्तिहरू नेपाली कांग्रेसका आधिकारिक धारणाहरू हुन्छन् ।’
प्रकाशित : पुस २६, २०७७ ०९:४६
काठमाडौँ — जीवन लिम्बुले शनिबार तेस्रो वार्सटाइनर गल्फ प्रतियोगिताको उपाधि जितेका छन् । नेपाल रोयल गल्फ क्लबमा भएको वार्सटाननर गल्फमा उनले ४२ अंक बटुलेका थिए । प्रतियोगिता ३/४ स्टेबलफोर्ड फर्म्याटमा खेलाइएको थियो ।
त्यसमा एसएसपी अशोक सिंह ४० अंकसहित उपविजेता भए । हृदेशकुमार सिंह ३२ अंक बटुल्दै ग्रस विजेता बने । भने अर्सिया बानुले ३५ अंकसहित महिलातर्फ उपाधि जितिन् । कल्याणी मोक्तान उपविजेता भइन् ।
सिनियरतर्फ दिलीपजंग रायमाझीले उपाधि जित्दा प्रज्वल शम्शेर राणा उपविजेता भए । सोनाम लामाले मोस्ट बर्डिजको अवार्ड जिते भने मिथुन राईले लङ्गेस्ट ड्राइभमा सफल भए । रोयल नेपाल गल्फ क्लबका अध्यक्ष प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठले क्लोजेस्ट टु द पिन अवार्ड जितेका भने बेस्ट स्पोर्ट्सम्यानसिपको अवार्ड कृष्णचन्द्र कायस्थले जिते ।
विजेतालाई जावलाखेल ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिजका प्रबन्ध निर्देशक राजबहादुर शाह, कार्यकारी निर्देशक शशिन जोशी, रोयल नेपाल गल्फ क्लबका अध्यक्ष प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठले पुरस्कृत गरेका थिए । विभिन्न विधाका ११ विजेतालाई वार्सटाइनर ट्रफी र आकर्षक टुर प्याकेज प्रदान गरिएको थियो ।
प्रकाशित : पुस २६, २०७७ ०९:१३